निःसन्तान दम्पतिलाई खुसीको खबर, न्यून शुल्कमा टेस्टट्युब बेबी जन्माउन पाइने - Ankuran Khabar
निःसन्तान दम्पतिलाई खुसीको खबर, न्यून शुल्कमा टेस्टट्युब बेबी जन्माउन पाइने
२०७६ चैत्र ५0
निःसन्तानको पीडाले कैयौँ दम्पती दुःखमा छन् । त्यसमाथि समाजको आक्षेप, घोचपेचले उनीहरू आहत भइरहेका हुन्छन् । विशेषतः सन्तान नजन्मिएको भन्दै धेरै महिलाले मानसिक तथा शारीरिक हिंसाको शिकार हुनुपरेको छ । यस्ता दम्पतिको लागि टेस्टट्युब बेबी प्रविधि बरदान साबित भएको छ । यो प्रविधिले कैयौं मानिसमा उमंग पैदा गराएको छ त, कैयौंमा विग्रन लागेको घरबार पुनर्मिलन गराएको छ ।
बेलायतमा पहिलो पटक सन्१९७८ जुलाई २५ मा टेस्टट्युब बेबी लुईस ब्राउनको जन्म भएको थियो । नेपालमा भने पहिलो पटक विसं २०६१ फागुन २० गते ओम अस्पतालमा टेस्टट्युब बेबी ओममणि तामाङको जन्म भएको थियो ।
त्यस समयदेखि हालसम्म आइपुग्दा टेस्टट्युब बेबीहरुको संख्या धेरै भएको छ । टेस्टट्युब बेबी सेन्टरहरु पनि धेरै खुलेका छन् । के हो टेस्टट्युब बेबी ? कसरी बनाईन्छ ? नेपालमा यसको आवश्यक्ता, अवस्था, संभावना र चुनौतीको बारेमा कलंकीको नेपाल नेशनल हस्पिटल स्थित नेपाल नेशनल फर्टिलिटी सेन्टरकी सञ्चालक स्त्री, प्रसुति तथा बाझोपन रोग बिशेषज्ञ डा. निकिता ढकालसंग अंकुरण खबरको टिमले गरेको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश…
के हो टेस्टट्युब बेबी प्रविधि ?
टेस्टट्युब बेबी कृत्रिम गर्भाधान इन व्रिटो फर्टिलाईजेशन (आईभिएफ) महिलाहरूमा कृत्रिम गर्भाधान गराउने स्वास्थ्य विज्ञानको एक नवीनतम प्रविधि हो । यसलाई बाँझोपन कम गर्ने प्रभावकारी प्रविधि मानिन्छ । यस प्रक्रियामा कुनै महिलाको अण्डाशयबाट अण्डालाई अलग गरेर त्यसलाई टेष्ट ट्युबमा शुक्राणुसँग निशेचित गराइन्छ । यसपछि निशेचित अन्डा महिलाको गर्भाशयमा राखिन्छ ।
केही मानिसमा टेस्टट्युब बेबी सामान्य बच्चाजस्तो हुदैनन् भन्ने बुझाई अझै छ नी ?
कत्तिपय मानिसको अझै पनि गतल सोचाई रहेको छ । टेस्टट्युब बेबी मार्फत जन्मिएका बच्चाहरु असामान्य हुन्छन् । गर्भमा रहदा पनि शिशुको विकास सामान्य तरिकाले हुँदैन् । तर त्यसो हैन, टेस्टट्युब बेबी मार्फत जन्मने बच्चाहरु पनि सामान्य बच्चा जस्तै हुन्छ । महिलाको पाठेघरमा साधारण अवस्थामा जस्तै भ्रूण विकसित भई शिशुको रूप धारण गर्दछ। गर्भअवस्था संवेदनशील अवस्था हो । चाहे त्यो प्राकृतिक होस या कृतिम । सामान्य गर्भवतीको जस्तै सावधानी अप्नाउनु पर्छ । तर यसमा मिहिनेत, दुख, पैसा अलि बढी लाग्ने भएकाले विशेष सचेत हुनुपर्छ ।
के हो बाँझोपन?
परिवार नियोजनका साधन नअप्नाई नियमित सहवास पश्चात् पनि एक डेड वर्षभित्र गर्भधारण नहुँनुलाई बाँझोपन वा निः सन्तान अवस्था भनिन्छ ।
बाँझोपन हुने कारणहरु के हुन ?
बाँझोपनका कारण व्यक्ति पिछे फरक पर्न सक्छ । उमेर, कुनै रोग, खानपान, बंशाणुगत गुण, वातवरण आदिको कारणले बाँझोपन हुन सक्छ । महिला र पुरुषमा पनि बाँझोपन हुने कारण फरक छन् । मूख्यतः विभिन्न खालको संक्रमण हुनु नै बाँझोपनको प्रमुख कारण हो ।
अण्डा निष्कासन नहुनु ।
युरिनरी समस्या हुनु ।
पाठेघरको नलीमा समस्या हुनु, पाठेघरमा ट्युमर पलाउनु ।
उमेर बढी हुन वा ढिला बच्चा जन्माउनु ।
यौनजन्य सरुवा रोग ।
असुरक्षित गर्भपतन आदि ।
यौनजन्य संक्रमण ।
ढल्कदो उमेर ।
शारीरिक दुर्वलता ।
यौन रोग ।
वंशाणुगत गुण आदि ।
यस्ता कारणबाट बच्न सक्यो भने बाँझोपनबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ ।
कहिले काँही महिला र पुरुष दुबैमा कुनै समस्या नहुँदै पनि बच्चा नभएको पाइन्छ । कतिपयको सामान्य कुराले पनि बच्चा नभैरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिले दुबै जनाको स्वास्थ परीक्षण गरि कारण पत्ता लगाइन्छ । अनि मात्र के कसो गर्ने निर्धारण गरिन्छ ।
यदि महिला र पुरुष दुबैको शुक्रकिट र अण्डाको निशेचन गराउँदा बच्चा रहन सम्भव नभए अन्य व्यक्तिबाट अण्डा वा शुक्रकिट लिएर पनि जन्माउँन सकिन्छ ।
कत्तिपयले नेपालमा टेष्टट्युव बेबी प्रविधि प्रभावकारी छैन भन्ने आरोप लाग्छ नी ?
त्यसो हैन्, नेपालमा सेवा प्रभावकारी छ । दक्ष विशेषज्ञहरु हुनुहुन्छ । तर यो संसारका जहाँ सुकै गए पनि सत प्रतिशत सफल हुन्छ भन्ने छैन् । कसैमा भ्रूण नै रहदैन् त कत्तिमा जन्मने बेलामा पनि खेर जान सक्छ । यो बिरामीको शारीरिक अवस्थामा भर पर्ने कुरा हो । त्यही भएरै सुरुमा नै आउन सक्ने जटिलता, लाग्ने पैसा लगाएतका सबैकुरा राम्ररी बुझाउनु पर्छ । कैयौ मानिसहरु टेष्टट्युव बेबी जन्माउनकै लागि भारत लगाएत विभिन्न देशमा जाने गरेको पाइन्छ । बाहिर जाँदा अझ महंगो पर्ने हुन्छ ।
किन आइभिएफ सेवा महंगो हुन्छ ?
हो, नेपालजस्तो विकाशोन्मुख राष्ट्रका लागि यो सेवा सबैको पहँचमा छैन् । यो सेवा चाहेर पनि धेरै सस्तो बनाउन सकिदैन् । किनकी यस्मा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्रीहरु विदेशबाट मगाउँनु पर्छ । एक पटक गर्भमा राखेको भ्रूण सफल नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा पटक पटक राख्नुपर्ने हुनसक्छ र अलि महंगो पर्न सक्छ ।
नेपाल नेशनल फर्टिलिटी सेन्टरको मूख्य ध्येय के हो ?
यस फर्टिलिटी सेन्टरको मूख्य उद्येश्य भनेकै सन्तानको चाँहाना भएका नि : सन्तान दम्पतिलाई सन्तान प्राप्त गराउँनु नै हो । यो सेवा तुलानात्मक रुपमा अलि महंगो छ । तर यस सेन्टरले न्यूनतम लागतमा सेवा दिने छ । सामान्यतया आइभिएफ प्रविधि वा टेस्टट्युव बेबी मार्फत बच्चा जन्माउदा तिन, चार लाख भन्दा माथि रकम लाग्छ । तर यस सेन्टरमा औषधि र अन्य केही आवश्यक कुरा बाहेक साढे दुई लाखमा यो सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य छ । यसको साथै देशका विभिन्न ठाउँमा गएर बाँझोपन हुने कारण, यसबाट बच्न अप्नाउनुपर्ने साबधानी र बाँझोपन भएको खण्डमा नेपाल नेशनल फर्टिलिटी सेन्टरले दिने सेवा सुविधाकाबारे परामर्श तथा निःशुल्क स्वास्थ परीक्षण शिविर राख्ने योजना छ ।
कोही पनि मानिस बाझोपनका कारण समाजबाट तिरस्कृत र परिवारमा हिंसा खेप्ने पात्र बन्नु नपरोस भनेर हामीले यस्तो अभियान सुरु गर्न लागेका र्हौ । अहिले कोरोना भाइरसको त्रासका कारण हामीले यस्ता कार्यक्रमहरु पछि सारेका छौं ।
६ किलो चरेससहित भारतीय नागरिक पक्राउ